ग्यास्ट्राइटिसले सताएको छ ? यसो गर्नुहोस्:: Naya Nepal
ग्यास्ट्राइटिसले सताएको छ ? यसो गर्नुहोस्
काँचो आलु लिएर त्यसलाई पिँधी त्यसको रस निकाल्नुस् र दिनको तीन पटक आधा कचौरा खाना खानु भन्दा १५ मिनेट अगाडि पिउनुस् । यो ग्यास्ट्राइटिस हराउने सर्वोत्कृष्ट तरिका हो ।
फलफूलका जुसले पनि ग्यास्ट्राइटिसको समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैगरी कागतीको रसमा अलिकति नुन मिसाएर पिउनाले प्राकृतिक तरिकाले ग्यास्ट्राइटिस कम हुन्छ ।
मासु, अल्कोहल, सूर्तीजन्य पदार्थ, कफि, चिया, मसालेदार खाना, जङक खाना जस्ता खानेकुराबाट टाढै रहूँ । बिहान बेलुका हिड्ने स्वीमिङ गर्ने जस्ता हल्का शारीरिक कसरतमा ध्यानदिनुस् र मानसिक तनावबाट टाढा रहनुस् ।
एकैचोटी धेरै खाना खानुभन्दा धेरै पटक कम वा थोरै थोरै खाना खानु उत्तम हुन्छ किनभने यसले तपाईको पेटलाई हल्का बनाउँछ र पाचन प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ ।